नेपालदृष्टि । नेपाली कांग्रेसमा आवद्धभई लामो राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेका नागेश्वर प्रसाद सिंह एक निष्ठावान समाजसेवीका रुपमा चिनिन्छन । राजनीतिकमात्र होईन, उतिकै लामो समय सम्म प्रध्यानाध्यपकको रुपमा रहि कयौन विद्याथीहरुको ज्ञान र उज्ज्वल भविश्यको निर्माण गर्ने एक कुसल, सम्मानित गुरुजन पनि हुन ।
आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई विकास र समृद्धिको रुपान्तरनै शिक्षा हो भन्ने विचारका सिंह एक पटक जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनतामाँझ आउँन चाहन्छन । त्यसैले उनि अहिले रतुवामाईको नगर प्रमुखको उम्मेदवारी लिई जनतामाँझ खडा भएका छन । नगर प्रमुख भएपछि तपाईका के कस्ता कार्ययोजनाहरु छन भन्ने विषयमा उनिसँग नेपालदृष्टिका सम्पादक सानुसँग केही कुराकानी भएको थियो प्रस्तुत छ त्यसको केही अशं :
तपाईका त्यस्ता के योजनाहरु छन, जुन नगर विकासका मुख्य पक्षहरु हुन सक्छन ?
मेरो मुख्य एजेण्डा भनेको समाजबाद उन्मूख आधुनिकरणसँगै विविध पक्षको विकास गर्नु हो । जस्तै निर्माणधिन सडकहरुलाई पुरा गर्ने र ग्रावेल सडकहरुलाई विस्तारै पिच गर्दै लैजाने । अधुरा र जोडिदै गरेका ठाँउमा विजुली बत्तिलाई पूर्णता दिने ।
नगरमा पुल र सडकको अति आवश्य ठाँउहरु पनि छन । त्यसका बारेमा के सोच्नुभएको छ ?
विल्कुल ! मलाई सबै हेक्का छ । जस्तै, धेरै लामो समयसम्म अलपत्र परेको रतुवा नदीको पुल कुनै पनि हालतमा पुरा गर्ने । यसमा धेरै कामहरु अगाडि बढेको पनि हामी सबैलाई थाँहा नै छ । तर यसमा विशेष पहल नभएको कारणले गर्दा यो अधुरो रहेको हो । जस्तै सिजुवा दामना जोड्ने पुल बनाउँन नसेके पनि झोलङ्गे पुल चाहि बनाउँने मेरो लक्ष्य छ । पुुलसँगै रतुवा र बक्राह नदीको तत्वन्धन गर्नु पर्ने ठुलो आवश्यकता देखिन्छ । यो पनि यसको सँगसँगै निर्माण गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।
कृषि सम्वन्धित के कस्तो योजना बनाउँनुभएको छ ?
रतुमाइमा रहेको हामी सबै किसाननै हौ । हामी सबैको जिविकोपार्जन कृषिनै हो । त्यसैले सर्बप्रथम सुलभ, सहज तरिकाले कृषि उत्पादनमा कसरी बृद्धि गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसको लागि कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नु पर्यो । त्यसमा सामान्य किसानसम्मको पहुचमा कृषियन्त्रिकरण पुह्याँउन सक्नु पर्यो । र मल, विजनको उचित ब्यवस्थापन हुनुपर्यो । यो अहिले हुन सकेको छैन । पहुच पुग्नेहरुले मात्र यसको सुविधाहरु उपभोग गरिराखेका छन । तर यसमा कुनै विभेद नगरे यो सुविधा सवैले उपभोग गर्न पाउँछन । यसलाई म सन्तुलन तरिकाले ब्यवस्थापन गर्ने अठोट लिएको छु ।
किसानलाई अर्को समस्या पनि छ । त्यो हो उचित बजारको ब्यवस्थापन नहुनु हो । त्यसको लागि किसानले उत्पादन गरेका समाग्री विस्तारको लागि ठूला सहर जस्तै ः विराटनगर, इटहरी, दमक, धरानआदि ठाँउमा पुह्याउँने काम नगरले पूर्ण जिम्मा लिनुपर्छ । जसबाट हामीलाई दोहोरो फाईदा पनि हुन्छ ।
कस्तो दोहोरो फाईदा ?
एकातिर किसानले उचित मूल्यमा आफ्नो उत्पादित सामान बेच्न पाउँछन । र विग्रिने, सडिने पनि डर भएन । अर्कोतिर रोजगारको पनि सृजना भयो । जस्तै धुवानीमा पनि मान्छे चाहियो । अनि स्टोर र कलेक्शनमा पनि उत्तिकै मान्छे चाहिन्छ । यता बजार भाउ राम्रो भयो भने किसानमा हौसला र उत्साह बढ्दै जान्छ ।
त्यस्तै रोजगारकै सिलसिलामा रतुवामाईको उत्तर र दक्षिण भेगमा एउटा उद्योगको स्थापना गर्ने विचार गरेको छुृ । उद्योग राख्नको लागि हामीसँग प्रसस्त ठाँउहरु छन । जस्तै,बक्राह र रतुवाको छेउ छाउँ उपयुक्त ठाँउ मान्न सकिन्छ । जसका कारण नगरको वातवरण पनि सुरक्षित हुन्छ ।
हाम्रो नगरमा अहिले त्यस्तो कुनै कल कारखानाहरु छैन । मैले धेरै उद्यमीहरुलाई भनेको पनि छु । उनिहरु राजि पनि भएका छन । मलाई लाग्छ यसको सुरुवातले युवा बर्गमा रोजगारको अवसरसँगै हाम्रा उत्पादन पनि सजिलैसँग बेचविखान हुन सक्छन ।
स्वास्थ्य, खेलकूद र शिक्षाको बारे के कस्तो योजना बनाउँनु भएको छ ?
हुन त खेलकूद र स्वास्थ्य नङ र मासुको जस्तो सम्वन्ध छ । त्यसैले स्वास्थ्य रहन खेलकूदको ठूलो महत्व छ । हिजो पनि नगरले खेलकूदलाई प्रसस्तरुपमा सञ्चालनमा ल्याएकै हो । तर पनि यसलाई अझै प्रोत्साहित गर्ने खालका क्रियाकलापहरु थप्ने । नगरले राष्ट्रिय खेलाडीको उत्पादन गर्ने वातवरण मिलाउँने । त्यसैले म युवाहरुको चाहना अनुसार खेलकूदलाई विशेष ध्यान दिने छु ।
सवै वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीलाई सहज र सुलभ तरिकाले सामान्य जनताको पहँचमा पुह्याउँने र वडाका विकट ठाँउमा स्वास्थ्य क्लिनिकको पनि स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छु । अर्को तर्फ दलित र सन्थाल परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य विमा गराउँने कामलाई निरन्तरता दिने छु ।
त्यस्तै नगरमा अर्को समस्या पनि छ, यसको लागि नेपाल सरकार र भुमि आयोगबाट रतुावमाई नगरपालिकामा अब्यवस्थित बसोबास भूमिहिन दलित सुकुम्वासीहरुलाई धनीपुर्जा वितरण कार्यक्रम हाम्रो नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने र जग्गा नाँप जाँचको कार्यलाई निरन्तर दिदै चाँडै सम्पन्न गरेर यो समस्यालाई निराकरण गर्ने अठोट लिएको छु ।
शिक्षा क्षेत्रमा ?
म शिक्षक भएको नाताले शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट छामेको छु । त्यसैले अव सूचना प्रविधिको जमना छ । आइटी प्रयोग गरेर शैक्षिक वेरोजगारिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । जस्तै वेभ पेज डिजाइन सम्वन्धि तालिममा एसएलसी पास गरेकालाई पनि प्राथमिकता दिने । जसको तालिमबाट अनलाइन स्वरोजगारको प्रसस्त सम्भावनाहरु हुन्छ । विद्यालयलाई गुणस्तरिय शिक्षाकोलागि विशेष पहल गर्ने ।
यी सवै काम तपाईको कार्यकालमा सम्भव छ ?
सम्भव अवश्य छ । यसमा कुनै शंका छैन । यी सवै कामका लागि एउटै मात्र विकल्प हुनु पर्यो भ्रष्टचार रहित कार्ययोजना । यो काम म बाट हुन्छ । यसको लागि जनताको सहयोग, माया, विश्वास र भरोसाको खाचो छ । त्यसैले रतुवामाईका जनताप्रति मैले ठूलो विश्वास र अपेक्षा राखेको छु । मलाई विश्वास छ,उहाँहरुको आर्शिवाद मेरो शीरोउपर रहने छ । मलाई एक चोटी सेवा गर्ने मौका दिनुहोस । अव मेरो जीवनको संकल्प भनेकै नगरको विकासले जनतामा सुख, शान्ति र समृद्धि ल्याउन सकोस, यो नै मेरो जीवनको महत्वपूर्ण सौभाग्य रहने छ ।
डिआईजी कोइरालालाई कैद सजाय र सर्वोच्च विवादमा